2020-2021 Cimilada Dayrta - Transportation | seattle.gov
2020-2021 Cimilada Dayrta
Qorshaheena Duufaanta Dayrta
Gudaha Seattle, dayrtu waxay keeni kartaa roob wayn, dabaylo badan, baraf, iyo dhado. SDOT waxay kormeertaa xaaladaha si ay u hubiso inaad nabad qabtid marka duufaanta dayrtu ay dhici rabto. Shaqaalaheennu waxay raacaan warbixinnada cimilada 24 saacadood maalintii, sannadka oo dhan, iyagoo toos ugu xiran National Weather Serviceiyo wararka tooska ah ee raadaarka Doppler. Waxaan isticmaalnaa aalad saadaalin ah oo ay soo saartay University of Washington laguna magacaabo SNOWWATCH si aan u ogaano sida duufaanku ugu badnaan u saameyn doono xaafadaha kala duwan. Macluumaadkani wuxuu gacan ka geysanayaa go'aaminta halka shaqaalahayaga ugu horayn looga baahan doono. Dareemayaasha dusha sare iyo dareemayaal kombuyuutar oo ku yaal buundooyinka magaalada ayaa bixiya hawo waqtiyaysan oo sax ah iyo heer kululka dusha wadada. Waxaan isticmaalnaa kaamirooyinka waqtiga dhabta ah, ee tooska u duubaya si aan u aragno xaaladaha dhabta ah ee jidadka muhiimka ah. Waxaad ka arki kartaa muuqaalka kamaradaha websaytkayaga, www.seattle.gov/travelers.
Ujeedadeenu Waa Inaan Ilaalino Seattle Inay Si Nabadgelyo Ah U Socoto
Intii lagu gudajiro duufaanta daran, shaqaalahayagu waxay shaqeeyaan 24/7 si ay uga nadiifiyaan jidadka ugu muhiimsan magaalada basaska iyo adeegyada gurmadka. Ka hor inta uusan barafku bilaabmin inuu soo dhaco, shaqaalaha waxay horay ugu sii daaweynayaan jidadka muhiimka ah iyo buundooyinka ka hortagaha barafka si ay uga caawiyaan barafka inuu sameysmo. Marka barafku bilaabmo inuu da'o, shaqaaluhu waxay si isdaba joog ah u jeexayaan jidadkooda waxayna wadada ku shubaan cusbo meeshii loogu baahdo inta barafku sii socdo. Waxaa jira qiyaastii 1200 mayl haadad ah oo ah jidadka waaweyn ee Seattle. Waxay nagu qaadan kartaa ilaa 12 saacadood si aan u nadiifino dhammaan dhulkan ka dib markuu istaago duufaanka. GPS ayaa lasocda goobaha ay joogaan cagafta iyo gawaarida xamuulka. Khariidad ku taal websaytkeena ayaa muujineysa sida dhowaan waddo loo banneeyay: www.seattle.gov/StormResponseMap
Waxaan Isu Diyaarinaa Barafka Sanadka Oo Dhan
Jiilaalka, waxaan tababarnaa shaqaalaha, sumadaynaa qalabka, waxaana lashaqeynaa iskaashatada hay'adaha maxalliga ah. Tani waxay ka dhigan tahay in shaqaalahayagu diyaar u yihiin inay shaqo aadaan marka dabaylo xoog badan, roob culus, ama dhado iyo baraf la saadaaliyo. Shaqadoodu waa inay waddooyinka ka nadiifiyaan wax kasta oo ka yimaada geedaha soo dhacay iyo laamaha dhadada iyo barafka, iyo inay hagaajiyaan calaamadaha iyo astaamaha. Waxaan sidoo kale hubineynaa in sahaydayada cusbada iyo dareeraha ka hortaga barafka ay keydsan yihiin.
Ka Jawaabida Buundada Aad U Saraysa Ee Galbeedka Seattle & COVID-19
Wixii ka dambeeya bilaha dayrta, sida socdaalayaasha gudaha iyo hareeraha Galbeedka Seattle iyo Duwamish Valley ay u kala gooshaan si aad ah 2020. Sanadaha soo socda, dadka u socdaalaya ama ka imaanaya gobolkaas waxay sii wadi doonaan inay saameyn ku yeeshaan ciriiriga sii kordhaya. Waxaan hubinay in jidadka gurmadka ee Buundada Galbeedka Seattle ay maraan dhammaan jidadka barafka ee hadda socda. Waa tan sida aad uga caawin karto dadka iyo badeecada inay socdaan inta lagu jiro waqtigan adag: Waa tan sida aad uga caawin karto dadka iyo badeecada inay socdaan inta lagu jiro waqtigan adag:
Qorshee oo ka filo ciriiri waddooyinka gurmadka.
Sii naftaada waqti dheeri ah oo aad ku gaarto meesha aad u socoto.
Isku day qaab gaadiid oo cusub sida socodka, baaskiil wadista, ama raacida baska. Iska ilaali inaad kaligaa gaari wadatid, haddii ay suurogal tahay.
U dulqaado oo u naxariiso dadka kula safraya oo tixgeli deriska ku nool hareeraha wadooyinka aad isticmaaleyso.
Waxaan sidoo kale hubinay in dhammaan goobaha baaritaanka COVID-19 ay ku jiraan Qorshaha Cimilada Dayrta. Iyo, maaddaama goobo badan lagu daray iyo hadii goobaha isbeddelaan, annagu waanu isbedeli karnaa oo waanu isku hagaajin karnaa si waafaqsan!
Qaybtaada Ka Qaado Si Ay Wadada Dhinacyadeedu Nadiif U Ahaadaan.
Dhamaanteen waan ku wada jirnaa arrintan qof walbana wuxuu mas'uul ka yahay inuu gacan ka geysto sidii loo nadiifin lahaa dhinacyada jidka ee gurigaaga hortiisa ama ganacsigaaga inta lagu jiro duufaanta barafka wadata. Waxa jira in ka badan 2,400 mayl oo dhinacyada jidadka Seattle ah, iyo shaqaalaha SDOT meel walba ma wada joogi karaan hal mar. Adiga ayaan ku tiirsanahay inaad samaysid qeybtaada si aan diirada u saarno nadiifinta hareeraha waddooyinka ee aan u dhowayn dhismooyinka sida gaarka loo leeyahay iyo nadiifinta jidadka muhiimka ah ee magaalada. Nadiifinta hareeraha wadada ee gurigaaga hortiisa ama ganacsigaaga ma ahan keliya sharciga, sidoo kale waa waxa saxda ah in la sameeyo si qof walba uu si nabadgelyo ah ugu safro inta lagu jiro duufaanka barafka, gaar ahaan dadka indhoolayaasha ah, naafada, ama ay ku adagtahay inay ku socdaan. La hadal deriskaaga duufaanta ka hor si aad u ogaato cidda caawimaad u baahan doonta bulshadaada. Si wada jir ah uga wada shaqeeya sidii midkiinba midka kale u taageeri lahaa, lana yimaada qorshe lagu hubinayo in dhammaan hareeraha wadada xaafadaada ay yihiin kuwa nadiifa si qof walba uu si nabadgelyo ah ugu socon karo.
Sida laysugu diyaariyo:
Sii adeego ka hor intuusan duufaanka ku dhufan. Waxaad u baahan doontaa badiilka barafka, boorso cusbada wadada ah, dhar diirran, busteyaal dheeri ah, tooshash, xirmooyinka gargaarka degdegga ah, iyo raashin saddex maalmood ah, biyo, iyo daawo loogu talagalay qoyska oo dhan.
Kahor inta aysan barafoobin, ku firdhi cusbada fadhida (ama shay kale oo deegaanka u wanaagsan) si aad uga hortagto in barafku samaysmo.
Marka uu bilawdo barafku, badeelka ku nadiifi hareeraha wadada 12-kii saacadood kasta ka hor intuusan xanfafku isu rogin baraf. Haddii aad awoodo, noqo deris wanaagsan oo ka caawi sidii aad u nadiifin lahayd wixii daadad duufaan ah iyo dariiqyada geeska ah ee xaafadaada ama gacan u fidiso deris kasta oo u baahan kara.
Soo Degso Buug-yarahayaga Cimilada Jiilaalka!